မြန်မာဗျည်း (၃၃)လုံး ဖြစ်ပေါ်လာပုံ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဒီမိုဟမ္မဒ်က အမေ့သားနှစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုတွေရိုင်းစိုင်းသွားအောင် ဘာတွေများ သွန်သင်ပေးလိုက်လို့လဲအမေ?
နိုင်ငံရေးကို နှာခေါင်းရှုံ့ခဲ့တဲ့ ရေပေါ်ဆီလူတန်းစားတွေ »
မြန်မာဗျည်း ၃၃-လုံး ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်း ပြောရာမှာ ဗျည်းရော သရရော မြန်မာအက္ခရာ ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာက စပြောဖို့လိုမှာပေါ့။ မြန်မာအက္ခရာဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဘိစီ ၅၀၀-လောက်က ၇၀၀-ကျော်အထိ ထွန်းကားခဲ့တဲ့
ဗြာဟ္မီ (Brahmi) အက္ခရာက ဆင်းသက်လာကြောင်း ပညာရှင်တွေက မိန့်ဆိုကြတယ်။
ခရစ်နှစ်ဦးပိုင်းလောက်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေ အရှေ့တောင်အာရှကို သင်္ဘောကြီးတွေနဲ့ ရွက်လွင့်လာ ရာမှ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ အက္ခရာ၊ နီတိကျမ်း၊ ဓမ္မသတ်ကျမ်း စတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေပါလာပြီး အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေမှာ ထွန်းကားတာပါ။ အဲဒီအက္ခရာဟာ မွန်လူမျိုးတွေဆီ အရင်ရောက်ပြီး အဲဒီကမှတဆင့် မြန်မာတွေဆီရောက်တယ်။ မြန်မာတွေက အဲဒီအက္ခရာတွေကို မြန်မာစကားသံတွေနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် လိုအပ်သလို မွမ်းမံအသုံးပြုရာက မြန်မာအက္ခရာ ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်
This entry was posted on October 15, 2014 at 6:35 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “မြန်မာဗျည်း (၃၃)လုံး ဖြစ်ပေါ်လာပုံ”
May 30, 2016 at 7:19 am | Reply
Devanagari is the source of all languages – kanada, malayam, sindhi, tamil, nepali, telagu, sanskrit, tailu, hindi, thai, lao, myanmar, pali-sound and many more. Devanagari has five diagonal rows and six horizontal rows- the same sound as all languages mentioned above. And the last remaining three sounds are placed at the bottom row.
Devanagari order is the source of almost all languages fron india and languages from myanmar, lao and thailand.